Alaaabaan ABO, Alaabaan Ummata Oromoo Faajjii Qabsoo Bilisummaa Oromooti! |
Qabsoon Kallachi QBO ABOn gaggeessaa turee fi jiru, Qabsoon ummanni Oromoo bal’aan alaa fi keessaan irree tokkoon wal ta’uun gaggeessaa turee fi jiru qabsoo Bilisummaa sabaa fi Walabummaa biyyaati.
Qabsoon hadhaan tana Oromoo miloyoonotaan damaqsee gaggeeffaama jiru kun qabsoo hadhuma ijaaramee kurfeeffamee sadarkaa amma irra jiruu kanarra ga’e osoo hin taane, qabsoo bu’aa bahii hedduu keessa qaxxaamuruudhaan dhufe, qabsoo Gootonni Oromoo kumii kitiliin itti wareegaman qabsoo dhiigaa fi lafee sabboontotaatiin ijaarame HANDHUURAA Jaallawwan kufaniiti.
Jaallan kutatoo fi muratoon sabaa kanneen QBO tarkaanfachiisaa turanii fi jiran Alabaa ABO Alaabaa ummata Oromoo qabatanii kakachuuni kan Waadaa/Irbuu sabaa guutanii Qabsotti seenan.
Faajjiin QBO Alaabaan ABO, Alabaan ummata Oromoo mallattoo waraqaa fi huccuu irratti qalamaan tolfame osoo hin taane, eenyummaa ummata Ormoo kan dhiigaa fi lafee goototaatiin ijaarame riqicha Bilisummaa fi Walabummaati.
Alaabaan ABO, Alaabaan Ummata Oromoo Alaabaa dhiignii gootota wareegamtoota Oromoo keessaan dhangala’u, Alabaa Magariisni Dacheen Oromiyaa keessaan hanga’u, Alabaa Bakkalchi Bilisummaa OROMOO fi Walabummaa OROMIYAA keessaan ifu eenyummaa Oromoo kan dhiigaan barreeffameedha.
Alaabaan ABO,Alaabaan hadhaan tana ummanni Oromoo Alaabaa kooti jechuun eenyummaa hin daddaaqamnee fi hin raafne taasifachuun Onnee isaa keessa kawwatee deemaa ture, kan hadha irra isaatti olbaasuun fira ittiin gammachisee diina ammoo “Dhadhaa Ibidda bu’e ” ittiin taasisee Alabaa HIREE malee HIRIYYAA hedduu hin qabneedha.
Hiriyyaan Alaabaa ABO,Alaabaa ummata Oromoo, Qabsaawota Buleeyyii fi Gameeyyii kan garaa Biyyee jiranii fi kanneen QBO hadhaan tana raraga Bilisummaa irra jrtu dhabamarraa hanbisuun itichanii utubanii nuun gahan gootota kabajaa bara baraan faarfamaa jiraataniidha.
Hireen Alaabaa kanaa shira diinni keessa keenyaa fi diinni innikkaa dhabamsiisuuf dhiitee bariitee aggaammii itti godhu jalaa jaalattoota eenyummaa sabaa ummata Oromootiin fudhatama argatee dhalaa dhalatti darbuudha.
Alaabaa kana ummanni Oromoo FAAJJII Qabsoo isaa eenyumaa hin laaqamne,hin haqamne, hin daddaaqamnee fi kan bara baraan ilmaan isaa dhaalchisu godhateeti kan raggaasifate. Kanaaf kan,
Falmaarraa hin deebinuu tarreerra dhaabbannaa…” jechuun faarsuuf. Anis kanaafi kan Alaabaan ABO,Alaabaan Ummata Oromoo Faajjii Qabsoo Bilisummaa Oromooti! jedheef.
Waan ta’eefis ummanni Oromoo keessaa fi alaan eenyummaa isaa kan ta’e ALAABAA isaa qabachuun falmaa mirga abbaa biyyummaa, Falmaa Bilisummaa fi Walabummaa gaggeessaa jirtan, haasawa afan -faajji Farreen QBO diinaa fi lukkeeleen diinaa taasisaniif gurra osoo hin kenniin eenyummaa keessaniin boonaa Qabsoo gaggeessaa jirtan Sochii warraaqsa Biyyoolessaa FXG Oromiyaa daraan finiinsaan dhaamsa kooti.
Toftaa fi Tarsiimoon diinaa fi lukkeeleen diinaa caasaa fi caaseffama hojii fakkeessuun daandii qabsoo irraa isin maqsuuf yaltu kamuu gurra keessan seenuu hin qabu. Qabsoo gaggeeffamaa turee fi jiru eenyu akka dhabama irraa hambisee fi eenyu akka firii itti godhe ummanni Oromoo tolchee beeka. Hundaan olitti ammoo Baabura Qabsoo ummanni Orommoo yaabbatee gara Bilisummaa fi Walabummaatti ittiin imalaa jiruuf Shifeerri/Konkolaachisaan Laaysansii/waraqaa Konkolaachisummaa akkamiitiin akka ittiin imala jiru Ummanni Oromoo sirritti beeka.
Kanaaf warreen QBO Hi! Bye jechuun keessaa baqatanii fi garaaf bultoonnii dhoortoo yerootiif jecha diinaan tishoo oolani bulan falaa fi mala QBO ummata Oromootiif kennan hin qaban qabaachuus hin danda’an ! waan ta’eef keessaa fi alattis diinnan fira fakkatanii QBO dantaa daabboo guyyaa guyyaa (daily bread) godhachuuf dhamaa’aa oolaa bulan hiluu osoo hin taane Haleeluun dhaamsa kooti!
Kanneen QBO tti shira yaadan cuftuu diinota Oromooti!
Diinnii laalattu malee hin laallattu, kanaaf Haleeluun dubbii fardiidha!